Heerkulka iyo Heerkulka dareemayaasha yaryar oo laga helay HomePod | Waxaan ka socdaa mac
Toni Cortes | | Alaabada Apple
Wiilasha iFixit iyagu waa pear. Isla marka qalab elektiroonig ah oo cusub uu suuqa soo galo, waxay helayaan hal (ama dhowr) oo ha ka waaban inaad ku dhejisid fardooleyda dhexdeeda oo aad u kala goyso googo ', si aad u aragto sida ay u dhisan yihiin, iyo waxyaabaha ay gudaha ku wataan.
Waxayna umuuqataa in kala daadinta HomePod mini, waxay soo heleen laba qaybood oo xiiso leh. Dareeraha heerkulka iyo dareeraha huurka. Raadin weyn oo la tixgelinayo in Apple aysan u adeegsan wax dalab ah sidoo kale xogtooda akhriska ee loo heli karo codsiyada kale ee saddexaad ee loo adeegsado. Waxay u badan tahay in lagu hawlgelin doono cusbooneysiinta qalabka casriga ee qalabka.
Bloomberg kaliya waxay daabacday warbixin sharaxaysa in farsamayaqaanada iFixit ay ogaadeen in Apple's HomePod mini ay kujiraan dareemayaal qarsoon oo cabbiraya heerkulka iyo qoyaan, Iyagoo bixinaya taxane xog ah oo ku imaan kara casriyeynta mustaqbalka ee barnaamijka qalabka.
Apple wuxuu si caadi ah u sii daayaa barnaamijyada waaweyn ee barnaamijyada HomePod at dhicid. Ma cadda haddii cusbooneysiinta soo socota, shirkaddu ay dhaqaajineyso dareeraha heerkulka, laakiin joogitaankeeda miinooyinka HomePod ee horay loo iibiyey waxay muujineysaa inay tahay waqti keliya inta ay shaqada bilaabayaan.
Haddii Apple ay go'aansato inay awood u siiso aaladda 'HomePod mini', waxay wadada u xaari kartaa istiraatiijiyad guryo isku dhafan oo isku dhafan HomeKit, Nidaamka Apple ee xukuma kuleylka, nalalka, qufulka, godadka iyo aaladaha kale ee guriga ku jira.
Sida warbixintu tilmaamayso, waxay sidoo kale caawin kartaa Apple's HomeKit oo la tartamaya astaamo la mid ah oo horeyba loogu soo bandhigay tartankan. Kuwii ugu dambeeyay Echo Amazon waxaa ka mid ah dareemayaal heerkul ah, halka Google ay ku iibiso dareemayaal hoosta summaddeeda Nest oo lagu dhejin karo meelo kala duwan oo guriga ah kuna xirnaan kara heerkulbeegyadaada si aad ula qabsato heerkulka qol kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Qalabka dareeraha heerkulka iyo qoyaanka ee aan firfircooneyn ayaa laga helay miniPod mini